Abuur, Wadaag oo Saamaynta Ganacsigaaga KPIs | Martech Zone
Sabti, Agoosto 3, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Mid ka mid ah arrimaha aan waligay la joogay Analytics ayaa ah in waratada ay u maleynayaan inay xirxirida cabirro aad iyo aad u badan ay tahay wadada lagu hormarinayo meheradooda. In kasta oo ay wax weyn tahay in la helo kumanyaal is-beddeliyeyaal ah oo laga warbixinayo, fahamka doorsoomayaasha dhab ahaantii saamaynta ku leh ganacsigaaga ayaa aad u dhib badan. Iyo xitaa fahamka noocyada doorsoomayaasha ah ayaa su'aal ka keenaya sida loo dhaqaajiyo cirbadda. Barxadaha falanqaynta waxay had iyo jeer umuuqdaan inay abuuraan su'aalo ka badan jawaabaha.
Sheekooyinka Tidemark Storylines waa muuqaalo waxqabad oo si firfircoon u sheegaya sheekada waxqabadka shirkadda. Kuwani "waxqabadka" waxay isku darayaan nidaamkaaga, xogtaada, iyo xogta ka baxsan derbiyadaada si ay kuu siiyaan sawir buuxa oo ganacsiga ah. Waxay ku siinayaan awood aad ku fahanto oo saameyn ku yeelatid caafimaadkaaga guud, shaqaalahaaga, ka waran haddii jilitaanka, faa iidada, iyo saadaasha isbeddelada.
Tidemark waa Maareynta Waxqabadka Shirkada ee Loo Dhisay Daruuraha. Waa kuwan muuqaalka guud:
Goobtooda, Tidemark waxay gudbisaa codsiyo falanqeyn ah oo loogu talagalay in lagu dardar geliyo howlahaaga. Barnaamijyadooda waxay ka faa'iideystaan ​​barxad codsi awood leh oo leh karti maarayn waxqabad oo lagu dhisay, hubinta inaad si dhakhso leh oo fudud aad ugu qaabeyn karto barnaamijyadeenna shuruudahaaga ganacsi.
Qorsheynta Maaliyadda - Abuur qorshayaal iyo saadaallo si ay gacan uga geysato u kaxeynta meheraddaada yoolkaaga. Qorshaynta Maaliyadeed waxaa ka mid ah hababka qorshaynta dakhliga, qorsheynta shaqaalaha, qorshaynta kharashka hawlgalka, qorshaynta kharashka raasumaalka, iyo xaashida dheelitirka & qorshaynta socodka lacagta, iyadoo la hubinayo inaad hesho sawir buuxa oo ku saabsan qorshooyinkaaga dhaqaale. Wadashaqeyn iyo falanqeyn ku dhex jirta, waxaad si dhaqso leh ugu dhexbixin kartaa saadaalinta cusub marka ganacsigaagu isbedelo.
Qorshe Hawleed - Ku wad meheraddaada adoo ka helaya talooyinka dadka ugu dhow alaabada & macaamiisha. Qorshaynta Hawlgalku waxay kuu oggolaaneysaa inaad soo ururiso wadayaasha hawlgalka si aad u abuurto saadaalin maaliyadeed iyo qorshooyin, kuu oggolaanaya inaad aragto dhammaan qorshaha ganacsiga. Isku xidhka hawlgalinta iyo qorshaynta maaliyadeed waxay hubinaysaa in qofkasta oo ururka ka mid ah uu la shaqeynayo isla macluumaadka isla ujeeddooyinkaas.
Maareynta Metrics - Si dhakhso leh u qiimee waxqabadka ururkaaga oo dhan oo tallaabo qaado marka loo baahdo. Codsigeena Maareynta Qiyaasta waxay kuu suurta gelineysaa inaad si otomaatig ah u falanqeyso kala duwanaanta arrimaha si aad u kala soocdo arrimaha, aad u ururiso bartilmaameedyada cabirrada & waxqabadka dhabta ah ee aan laga helin nidaamyada ilaha, aad iskaashi ka dhex sameyso hannaanka falanqayntaada, oo aad u fiirsato saameynta ay ku leedahay natiijooyinka maaliyadeed.
Codsiyada Tidemark waxay wadaagaan barmaamij codsi ku saleysan daruur oo bixiya qaab dhismeedka si loo hubiyo in barnaamijyadeenna oo dhami ay bixiyaan xaalad iyo wax qabad
Tags: dashboardsMaareynta Waxqabadka Shirkaddakpissheekooyin sheekooyintidemarksheekooyinka tidemark